Minisitry ny Atitany: “Aoka tsy hihoa-pefy” | NewsMada
Minisitry ny Atitany: “Aoka tsy hihoa-pefy”
“Tsy azo ampiasaina amin’ny fampielezan-kevitra ny fitaovam-panjakana. Na inona na inona fitaovam-panjakana azo tamin’ny volam-panjakana, tsy azon’ny solontenam-panjakana sy ny mpiasam-panjakana ampiasaina amin’ny fampielezan-kevitra.”hoy ny minisitry ny Atitany, Razafimahefa Tianarivelo. Ny olom-panjakana rehetra eo ambany fifehezan’ny solontenam-panjakana koa tsy azo ampiasaina amin’ny fampielezan-kevitra.
“Tsy azontsika solontenam-panjakana atao ny manery ny olom-panjakana sy ny mpiasam-panjakana hoe hanampy ny kandidà izatsy na izaroa. Voararan’ny lalàna izany”, hoy izy. Ireny solontenam-panjakana ireny no tomponandraikitra voalohany amin’ny filaminana any amin’ny fari-piadidiany.
Tafiditra tanteraka ao anatin’ny vanim-potoan’ny fampielezan-kevitra izao. Fampahatsiahivana ny nataony ho an’ireo solontenam-panjakana rehetra any amin’ny lafintany rehetra, satria manana anjara andraikitra eo amin’izao vanim-potoan’ny fampielezan-kevitra amin’izao fifidianana izao izy ireo.